Iindleko zeDatha eninzi kakhulu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 31, 2013 NgoLwesine, Meyi 30, 2013 UKelsey Cox
Yonke imihla, I-2.5 quintillion byte yedatha zenziwe yimibutho yokuthengisa kunye nentengiso. Nangona ukugcina iintaba zedatha ngethemba lokufumana ulwazi olunokwenzeka kunokubonakala ngathi kukusebenzisa ngokufanelekileyo ixesha kunye nemali yamashishini, iindleko ezinxulumene nazo zinokukumangalisa.
Kutshanje kwi-infographic zidalwe IiNjini zeLattice i bonisa ukuba Ama-88% amaqela okuthengisa aphoswa ngamathuba oshishino ngenxa yolwazi olungonelanga. Kwabo baphando, I-24.5% yaziva iceliwe ngumngeni ngedatha kunye nexesha elithathwayo kuphando, ngelixa abanye abaphenduli bebengaxhotyiswanga kakuhle okanye bengenamdla wokusingatha ngokuchanekileyo ukungena kwedatha.
Ukongeza kukungabikho okwaneleyo Isicwangciso esikhulu sedatha, ukugcina nokuhlalutya ulwazi ngokwenene indleko amashishini imali enkulu. Iintengiso eziqhelekileyo zichitha umndilili we Iiyure ezi-4 / iveki xa ulungiselela ukuthengisa, Kwaye ngesigidi esinye seentengiso zangoku e-US, oku kufikelela kwi- $ 50 yezigidigidi ngonyaka.
Nanku ukujonga okunzulu kokungafunyanwa yiLattice:
tags: idatha enkuluIsicwangciso esikhulu sedathaIinkcukachaukugcinwa kweenkcukachakwi-infographicqhinga